राजेन्द्र महतोको जीवन : ‘ब्रान्डेड हेर्ने बानी छैन, धोती कुर्ता मेरो पहिचान हो’ | Ratopati
'काँग्रेस–कम्युनिष्टजस्तो मेरो राजनीति सत्ताका लागि होइन'
personकुवेर गिरी exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख २५, २०७८ chat_bubble_outline0
राजेन्द्र महतो नेपाली राजनीतिमा स्थापित नाम हो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि उनी राजनीतिमा सक्रिय छन् । २०४६ सालबाट गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको सद्भावना परिषद्मा आबद्ध भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका महतो २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा सर्लाहीबाट उम्मेदवार भएका थिए । तर, उनी नेपाली काँग्रेसकी नेतृ मीना पाण्डेसँग पराजित हुन पुगे । २०५१ को मध्यावधि चुनाव पनि महतोका लागि अनुकूल भएन । संसदमा प्रवेश गर्न उनले २०५६ सालको निर्वाचन कुर्नुपर्&zwj;यो ।
नेपाली राजनीतिमा महतोलाई चतुर राजनीतिज्ञका रूपमा लिइन्छ । मधेस केन्द्रित दल निर्माण गरेर विभाजन र एकताका साक्षी बनेका महतो अहिले संसद्को तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का वरिष्ठ नेता छन् ।
यिनै नेता महतोको जीवनका विभिन्न पाटाबारे रातोपाटीको ‘मेरो जीवन’ स्तम्भमा उनकै शब्दमा ।
त्यसपछि सोही पार्टीको महासचिव, उपाध्यक्ष हँुदै अध्यक्ष भएँ । म अहिले जसपामा छु । विभिन्न पार्टीसँग एकता गर्दै नाम फेर्दै जसपा अहिलेको अवस्थामा आएको हो ।
२०४८ र ०५१ मा समेत चुनाव लडेको म २०५६ सालको चुनावमा संसद् छिरेँ । त्यो समयदेखि अहिलेसम्म प्रायः सांसद छु । ०५६ अगाडि उच्चस्तरीय नागरिकता समस्या समाधान आयोगमा रहेरसमेत काम गरेको थिएँ ।
२०६५ सालमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएको थिएँ । त्यसपछि प्रचण्ड र माधव नेपालको सरकारमा पनि मन्त्री भएँ । चौथो पटक डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री बनेको थिएँ ।
मैले जहिले पनि सङ्घर्षको राजनीति गरें । आफ्नो मुद्दामा अडिग रहेँ । यसले मलाई राजनीतिमा पीडा र कष्ट मात्र मिल्यो । मेरो राजनीति काँग्रेस र कम्युनिस्टको जस्तो सत्ताका लागि होइन । अन्तिम प्राप्ति त सत्ता होला । अधिकार पहिचानपछि मात्र मेरो सत्ताको कुरा आउँछ ।
अहिलेको केपी ओलीको सरकार बन्दा तीन वर्षअघि राजपालाई सरकारमा सामेल गर्ने प्रयास भएको थियो । त्यो समय हामीले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधनलगायतका विषय माग राखेका थियौँ । त्यो माग पूरा नभएपछि हामी सरकारमा गएनौँ ।
फिट्नेसका सवालमा सजग छु । प्रत्येक दिन एक घण्टा मर्निङ वाक गर्छु । बाहिर निस्कने वातावरण भएन भने घरमै ट्रेडमिलमा दौडिन्छु । त्यसपछि समय भए प्राणायाम पनि गर्छु ।
सन् २००४ मा बाबा रामदेवको प्राणायाम सिकेको थिएँ । त्यो समयदेखि नियमित गर्छु । ट्रेडमिल बाहेकका एक्सरसाइजका सामान घरमा छन् । ती प्रयोग गर्दिनँ ।
धोती, कुर्ता, ज्वारीकोट मेरो मनपर्ने पोशाक हो । यी पहिरन सजिलो लाग्छ । मेरो पहिचान पनि हो । धेरै जाडोमा म धोती लगाउँदिनँ । कोट, पाइन्ट नै प्रयोग गर्छु । ह्याट, टोपी केही लगाउने बानी छैन ।
मेरो मनपर्ने पहिरन रङ सेतो हो । त्यसपछि कालो कलर मनपर्छ । पहिरनमा धोतीकुर्ता रेडिमेड किन्छु । कोट, पाइन्ट सिलाउँछु । पहिरनमा ब्रान्डेड हेर्ने बानी छैन । मन परेको किन्छु । केही उपहार पनि आउँछन् ।
के हो सर्वोच्च अदालतको समस्या ? के छ समाधान ?